Ushukela kumchamo (glucosuria): isimo esiyingozi ngokwengeziwe > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Namuhla, cishe nganoma yisiphi isifo, kufanele kuthathwe ukuhlolwa komchamo ojwayelekile. Ngokwemiphumela yayo, kungenzeka ukuthi kuhlolwe isimo sempilo esijwayelekile, ukuvikela izifo eziningi, ukuqala kwentuthuko abantu abangasoli nakancane kuyo. Isimpawu eshaqisayo kungaba ukubonakala komchamo wokuhlola ushukela (ushukela). Isho ukuthini le nkomba nokuthi yini okufanele yenziwe ezimeni ezinjalo?
Luyini ushukela futhi kungani uchama
Ngamagama ajwayelekile, ushukela ushukela. Kuyadingeka emzimbeni, ngoba uwunika amandla futhi unikeza zonke izinqubo zokuphila. IGlucose ingena emzimbeni ngokudla kwe-carbohydrate noma ushukela. Ezithobeni zokugaya, uhanjiswa egazini, bese ihlungwa kanye ne-glomeruli enamafutha. Imvamisa, emva kwalokho ubuyela egazini bese engena kuzo zonke izitho zomzimba. Okusho ukuthi, kumchamo wesintu, ushukela kufanele uvame ukungabikho noma uqukethe inani elingabalulekanga.
IGlucose ngomunye wemithombo evamile yamandla ezinto eziphilayo emhlabeni.
Uma ngemuva kokuhlaziywa kwavela ukuthi kukhona ushukela, lokhu kukhombisa ukungahambi kahle emzimbeni. Ngokugcwala ushukela omningi, kuba nzima ngezinso ukwenza umsebenzi wokuhlunga, ngakho-ke ingxenye yeglucose ayiphindi ingene egazini, kepha iphuma nomchamo. Le nto eyenzeka emzimbeni ibizwa ngokuthi yi-glucosuria. Phakathi kwezifo ezidala ukuthi kube noshukela nokuhluleka kwezinso.
Ngokukhula kweminyaka, amandla okuhlunga kwezinso ayancipha, ngakho-ke kubantu asebekhulile, ukuba khona kwe-glucose kumchamo kungahle kube ngaphezulu kunamanani ajwayelekile.
Ithebhulethi: amazinga kashukela egulazi
Ushukela ojwayelekile womchamo
Amadoda 0.06-0.082 mmol / L
Abesifazane 0.05-0.08 mmol / L
Izingane 3-5.5 mmol / L
Abesifazane abakhulelwe Kufika ku-5.1 mmol / l
Kukhona into efana nomkhawulo wezinso. Lesi yisimo lapho izinso zisondele khona ekutheni azisakwazi ukubhekana nokuhlungwa koshukela omkhulu. Inkomba yile:
kwabesilisa nabesifazane - 10 mmol / l,
ezinganeni - 10.45-12.65 mmol / l,
kwabesifazane abakhulelwe - 7.0 mmol / l.
Imiphumela yokuhlaziya ingathinteka ngu:
udle izithelo ezimnandi ngosuku lwangaphambi kokuhlaziywa,
inkambo yokutheleleka emzimbeni.
Kungakho odokotela ezimweni eziningi bancoma ukuthi kwenziwe kabusha ukuhlaziya.
Izimbangela zokwanda kwe-glucose
Ngenxa yezizathu zokukhuphuka kweglucose, kukhona:
i-pathological (okubangelwa izifo noma ukuphazamiseka kwezinhlelo zomzimba):
glomerulonephritis, pyelonephritis, Ukwephulwa kwe-glomerular filtration yegazi (glomerulonephritis) kungaholela ekwandeni koshukela emchameni
ukusebenza komzimba okusebenzayo,
ukusetshenziswa kabi kokudla okunoshukela noma okune-carbohydrate,
ukudakwa ngenxa yobuthi yizakhi zamakhemikhali.
Izimpawu ezikhombisa ubukhona be-pathology
Izimpawu zeglucose ephezulu zifaka:
ukwehla kwesisindo - kancane kancane, kepha ngokuba nesimo esizinzile,
ukozela, ukukhathala, okungahambisani nomsebenzi womzimba noma ukucindezela,
ukoma nomlomo owomile usuku lonke,
ukuchama kaningi okuhlobene nezifo ezingamahlalakhona (cystitis), isifiso esingenangqondo endlini yangasese,
ukomisa nokushisa isikhumba - kuvame ukubonwa kubantu abadala abasendaweni yangasese,
indlala engapheli, ngisho nangemva kokudla.
Uma kutholakale izimpawu ezi-2-3, khona-ke lokhu kufanele kube yisizathu sokuthatha ukuhlolwa komchamo nokuxhumana nodokotela oyi-urologist noma owelaphi. Ngeshwa, izimpawu ezinjengokomela, umlomo owomile, isikhumba esivuthayo, ukuncipha kwesisindo, zingaveli ngokushesha, kodwa ngemuva kwesikhashana. Ngalesi sikhathi, lesi sifo siyakwazi ukukhulisa futhi size sibe yisifo esingamahlalakhona. Ngakho-ke, awudingi ukuzindla ngokwakho ekhaya, kepha kufanele uthintane nodokotela ngokushesha ozokhomba lesi sifo futhi anikeze inkambo yokwelashwa.
Ungakulungiselela kanjani ukuhlaziya umchamo ushukela
Ukuthola imiphumela elungile kakhulu yokuhlolwa komchamo ushukela, udinga ukwenqaba noma ukunciphisa inani lokudla kwe-carbohydrate oludliwe ezinsukwini ezimbalwa. Kuyenqatshelwe ngokuphelele ukuphuza utshwala, ngisho neziphuzo ezithambile.
Kunezindlela ezimbili zokuthumela uhlaziyo:
ukuqoqwa komchamo wasekuseni
imali yansuku zonke.
Engxenyeni yasekuseni yomchamo uqukethe zonke izinto ezidingekayo ocwaningweni. Ekuseni ngosuku kocingo, kufanele uye kugeza uyogeza izitho zakho zangasese. Ngemuva kwalokhu, ingxenye yokuqala yomchamo yehliselwa endlini yangasese, bese okusele kuqokelelwa esitsheni esilungiselelwe.
Abaningi benza amaphutha besebenzisa izimbiza zokudla zezingane noma ezinye iziqukathi njengesitsha se-biomaterial. Zingaqukatha izinto ezahlukahlukene odongeni ezithinta umphumela.
Ekuhlaziyweni kwansuku zonke, okuqukethwe kumele kuqoqwe usuku lonke. Wonke umchamo uqoqwe esitsheni esisodwa sangcolile. Ekuhlaziyweni okunjalo, i-150 ml yezinto ezibonakalayo, ekhethwe kunani eliphelele, izokwanela
Ukuba khona kwe-glucose kumchamo kungakhombisa isifo esifana nesifo sikashukela. Kuyinto yohlobo loku-1 nolwe-2:
Isifo sikashukela sohlobo lokuqala sitholakala kakhulu phakathi kweminyaka yobudala engama-25 nengama-30. Lesi sifo ukungasebenzi kahle kwamanyikwe, okuyeka ukukhipha i-insulin ngamanani adingeka ngumzimba, okuholela ekukhuleni kweglucose egazini nasemchameni. Izimbangela zalesi sifo yilezi:
ukutheleleka ngegciwane kwangaphambilini,
ukungasebenzi kahle kwamasosha omzimba,
Isifo sikashukela sohlobo 2 sihambisana nokuntuleka kwamangqamuzana amaseli omzimba ukuya kwi-insulin, okuqhubeka nokukhiqizwa ngumzimba. Lesi sifo kunzima ukusibona ekuqaleni, ngakho-ke abantu abangaphezulu kweminyaka engama-40 ubudala basithola. Isifo esinjalo kwesinye isikhathi sitholakala kubantu abahola indlela engalungile futhi bakhuluphele ngokweqile.
Imiphumela engaba khona yeglucose yokuchama
Imiphumela ye-glucose ephakeme yokuphakama ingaba yimbi futhi iholele ekufeni. Ngaphandle kokwelashwa okufika ngesikhathi, amanani aphakeme kashukela womchamo ayathinta:
inhliziyo - umsebenzi wayo uyaphazamiseka, ngenxa yalokho ukwanda kwengozi yokushaywa yinhliziyo nokushaya kwenhliziyo,
imikhumbi - izindonga zilahlekelwa amandla nokuvumelana nezimo, imikhumbi iba brittle, okuholela ekukhaleni, kanye nombono oncishisiwe kanye nokukhula kobumpumputhe,
isimo sesikhumba semilensi - imvamisa kakhulu yezilonda ezingapholi kakhulu emilenzeni, ezimeni ezisezingeni eliphakeme ziholela ekunqunyweni kwemilenze, Izilonda ze-trophic ezinyaweni zivame ukubangelwa yi-pathology yegazi lomzimba ngenxa yesifo sikashukela
uhlelo lwezinzwa - ukubekeka kwemikhawulo, ukujuluka,
izinso - baphoqeleka ukuthi basebenze kumodi enkudlwana yokususa ushukela omningi, lokhu kuholela ekungasebenzi kahle kokusebenza kwabo, ukuthuthukiswa kokwehluleka kwezinso.
Kwabesifazane abakhulelwe, ushukela ophakeme uyinto evamile, kodwa akufanele weqe amanani aphezulu. Ukwanda koshukela kuthinta kabi uhlelo lwe-vascular, kuphazamisa ukwakheka kwezicubu zama-ovari ne-placenta. Lokhu kungaba nemiphumela emibi kumama nakwa-fetus:
yenza kube nzima inqubo yokuzala umbungu nokubeletha,
kuholele ekulimaleni kwengane,
iba imbangela yesifo sikashukela sokuzalwa kwengane lapho ingane ithatha i-insulin yokwenziwa kwayo konke impilo.
Ungakuvimbela kanjani i-pathology
Ukuvimbela ukubonakala kweglucose ngokweqile, udinga ukunamathela kwindlela yokuphila enempilo, udle ukudla okunempilo nokuzivocavoca. Ukulinganisa ukudla okumnandi nokunamafutha kuzoba nomphumo omuhle hhayi kuphela ekuhlaziyeni, kodwa nasempilweni jikelele.
Nganoma yiziphi izimpawu eziphazamisayo, kufanele ufune usizo kochwepheshe hhayi ukuzindla. Njalo ezinyangeni eziyisithupha, kuyadingeka ukuthatha isivivinyo somchamo ukuze uqaphele ukuphambuka esigabeni sokuqala futhi uvikele ukuqhubeka kwe-pathology.
Uma othile enesifo sikashukela i-mellitus phakathi kwama-stenoids, umuntu kufanele ahlole njalo izinga labo loshukela (okungenani kanye ngonyaka).
Ushukela ophakanyisiwe emchamweni kuwuphawu lwesixwayiso, ikakhulukazi uma luqinisekiswa ngokuhlolwa okuphindaphindiwe. Kulokhu, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha ukuthola imbangela yokuphambuka futhi uvikele nesifo sikashukela.
Isimo sikashukela kumchamo asidluli ku-0,008 mmol ngelitha. Ukuvela komchamo wokugcotshwa kweglucose ephakeme kuwuphawu olwethusayo. Imvamisa, kukhombisa i-pathologies yesibindi, izinso, ezinye izitho zangaphakathi, ikakhulukazi ama-pancreas. Endabeni yokugcina, singakhuluma ngokuba khona kwesifo sikashukela. Ngaphandle, lokhu kungabonakala ezimeni ezimbalwa.
Kusho ukuthini futhi kanjani ukwehlisa ushukela wokuchama ezinganeni nakubantu abadala?
Umchamo kufanele uqukathe ushukela omncane ngangokunokwenzeka. Izinkomba kufanele zisuke ku-0.06 ziye ku-0.08 mmol ilitha ngalinye.
Uma ushukela ungatholakali ngesikhathi sokuhlaziywa kwe-biochemical and general, kubhekwa ukuthi konke kuhambisana nomzimba.
Lapho kuvela inani elikhulu likashukela egazini, ama-rebu tubules awasakwazi ukuwuthatha kumchamo, okuyisizathu sokuvela koshukela emchameni - glucosuria.
Ngobudala, ukwanda okuncane kweglucose kubantu kuthathwa njengokujwayelekile. Futhi, ushukela emzimbeni ungaphakanyiswa lapho umuntu enesifo sezinso.
Ukuthola ukuthi i-glucose igxilile emzimbeni wakho, kuyadingeka ukuthi kwenziwe izivivinyo zaselebhu ukuze uhlole ushukela emchini bese uhlola ushukela ukuze uthole ushukela. Lokhu kungenziwa emtholampilo noma ekhaya, kusetshenziswa imichilo ekhethekile yokuhlola namadivayisi athengiswa emakhemisi.
Kwenzeka kanjani i-glucosuria
Inhloso yokuzivocavoca ushukela ukubuyiswa kwezindleko zamandla ezingapheli emzimbeni. Umkhiqizo udonswa yisistimu yokujikeleza esuka kwipheshana lesisu kanye namanye ama-carbohydrate angena lapho nokudla.
Ama-pancreas alawulwa yi-insulin ngokulawulwa kashukela wegazi. Yihomoni, umqhubi we-biochemical we-glucose ungene ezicutshini zamaselula. I-insulin inciphisa ukuqoqwa kwe-carbohydrate ifinyelele ezingeni elifunekayo ukuze ifakwe iseli.
Umthengi oyinhloko we-glucose ubuchopho. Ukusuka lapha, ngokusebenzisa izindlala ze-pituitary, thyroid kanye ne-adrenal, kukhona ukwabiwa okuvamile kwamandla akhona we-carbohydrate-energy.
Uma ukungasebenzi kahle kwamanyikwe, ukukhiqizwa kwe-insulin kuyaphazamiseka. Ngenxa yalokho, izinga loshukela osegazini liyashintsha. Umphumela izindlela ezimbili:
I-hypoglycemia - ngokukhiqizwa kwe-hormone okunciphile,
I-hyperglycemia - ukuthathwa kwegazi nge-glucose lapho kumiswa ngokuphelele ukwenziwa kabusha kwe-insulin.
Ngalesi sifo kusho ukungalingani okuyingxenye noma okuphelele kokulawulwa kwe-thyroid ye-hormonal ekuhlushwa kwe-glucose. Ushukela omningi awukwazi ukudonswa amangqamuzana futhi ufakwa:
emafutheni angaphansi (okuholela ekukhuluphiseni),
izicubu ezithintekayo zesibindi (i-cirrhosis esebenzayo),
izindlala ze-adrenal (ukwehluleka kwe-hormonal emsebenzini wezinso nezitho zangasese).
Ingxenye yoshukela, engangenanga kusuka ezinso ngenxa yokufakelwa kwegazi, ihlala ku-ureters. Kube sekuvela ushukela emchameni - lokhu kusho ukuthi umzimba usesigabeni esithile sesifo sikashukela. Yikuphi - ngokuqondile kunganqunywa kuphela ngemiphumela yokuhlaziywa.
Kodwa ukungakhululeki kuvela esigulini kuqala. Ngisho umbala womchamo uyashintsha. Lapho kuvela izimpawu zokuqala zangaphandle, kufanele uthintane nochwepheshe ngokushesha futhi uphumelele uhlolo lomchamo ushukela.
Ngosuku lokuhlaziywa, inani lemikhiqizo elingathinta umbala wangempela womchamo kufanele lingafakwa ekudleni komuntu ovivinyiwe, futhi lihlanekise imininingwane etholakele. Lokhu kufaka phakathi: ama-beet, izithelo zamawolintshi, ama-buckwheat, amaswidi athile (i-marmalade, ushokoledi, njll.)
Ukuhlanzeka ngokuphelele kwezitho zangasese (ikakhulukazi abesifazane nezingane)
Ukuqoqa umthamo wansuku zonke womchamo ushukela, kukhethwa isitsha esidingekayo. Ingilazi engu-3-5 litre noma isitsha seplastiki esinesembozo sanele
Ingxenye yokuqala yomchamo ayisetshenziselwa ucwaningo. Konke okunye kudinga ukuqoqwa kungakapheli amahora angama-24.
Umchamo oqoqiwe uyanyakaziswa, uxutshwe bese uthululelwa ezitsheni zelebhu. Bese kwenziwa ukuhlaziywa kwe-biochemical of umchamo kashukela.
Ukuhlaziywa okujwayelekile kwenziwa kabili ngonyaka. Kuhlolwe: umbala womchamo (ojwayelekile - obala), i-acidity, umchamo wokuchama (amandla athile adonsela phansi - kukhombisa amandla ezinso ukugxilisa umchamo), amaprotheni, ushukela kanye nama-acetates. Iphunga le-acetone lomchamo lingakhombisa umlingiswa onqobayo ekwakhiweni kwesifo sikashukela.
Ngesikhathi sokuya esikhathini, umcimbi wenziwa kuphela lapho impilo yowesifazane isengozini.
Ukuhlolwa kwemiphumela yokuhlaziya
Ushukela ophakanyisiwe emchameni uyinkomba ebucayi. Ukwenza ukuxilongwa okunembe ngokwengeziwe, kwenziwa ukuhlaziywa okuphindaphindiwe. Ngaphezu kwalokho, igazi lesiguli liyahlolwa. Okuqukethwe okwandisiwe kashukela egazini nomchamo kuvumela ukuphetha ngezinga elanele lokuthi kungenzeka ukuthi kukhona isifo sikashukela.
Amaphutha ekuhlaziyeni kungenzeka ngenxa yokwephulwa kwemithetho ekuqoqweni komchamo, kanye nangomphumela wokulashwa kwezidakamizwa.
Ngaphezu kwalokho, ukunemba kwemiphumela kuthonywa isimo semizwa sesiguli, i-renal pathology nezinqubo zomzimba ezenzeka nabesifazane ezinyangeni zokugcina zokukhulelwa.
Umchamo kwisifo sikashukela i-mellitus ezimfanelweni zayo ze-biochemical kuyahlukahluka ngokuya ngobulili kanye nobudala beziguli.
Amanani ashukela avamile wokuchama kubantu abadala nasezinganeni ayalingana futhi aqala ku-3 kuye ku-5 mmol / l. Okufanayo kusebenza kudatha ye-hemoanalysis. Kusho ukuthini ushukela womchamo ophezulu? Izinketho eziningana kungenzeka:
Ukuxilongwa okuthize kusungulwa kusetshenziswa inkimbinkimbi yokuxilongwa okuhlukile, okubandakanya umlando wezokwelapha, izimpawu, ukuhlaziywa kwe-ultrasound. Ngesisekelo sawo lonke ulwazi kukhona ukwelashwa okufanele okunqunyelwe.
Izinkomba zokuhlaziya yilezi:
Imithetho yokuqoqa umchamo ezinganeni ngesisekelo sokuphuma iyafana nakubantu abadala. Ekhaya ngale njongo, ungasebenzisa imichilo ekhethekile ukuthola ushukela emchameni.
I-pyocotest imi ngalendlela elandelayo: isiqeshana sephepha elincanyana elinamaconsi ezinkomba ezifakwe kuso siphonswa esibhomeni sepulasitiki nengxenye yomchamo wansuku zonke. Isikhombi ngasinye sibonisa izinga elithile likashukela.
Ushukela we-urine kushukela we-mellitus ufaka isikhombisi ngemibala ekhombisa u-8-10 mmol kashukela ilitha ngalinye lomchamo nsuku zonke.
Isibonakaliso esidalulwa kakhulu se-glucosuria kubantu besifazane ukomelela okungapheli, kokwehlisa amandla, ukulunywa nokuqina komzimba esithweni sangasese. Endleleni, ubusuku bokuphambanisa ebusuku buba bukhulu kakhulu, umbono uyawohloka, isisindo nobungqabavu buyancipha.
Ngaphezu kwalokho, ushukela kumchamo ungakhula kafushane ngesikhathi sokukhulelwa noma lapho udla amanani amaningi okudla ushukela. Lesi yisinkomba somzimba, hhayi se-pathological.Ukuhlolwa okuphindaphindwayo kungasusa isimo sesifo sikashukela.
Ushukela we-urine emadodeni uvame ukukhombisa ubukhona bezinguquko ze-cirrhotic esibindini ezihambisana nokusebenzisa kabi utshwala, umlutha wokudla okunamafutha nophunga. Ukubonakaliswa okuhlobene nobudala kwe-urolithiasis yezinso, ukuvuvukala kwamanyikwe nakho kungenzeka.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nokuvimbela
Njengamanje, isifo sikashukela asithathwa njengesifo esingalapheki. Umphumela wokupholisa uvela ngamalungiselelo aqukethe i-insulin, ama-vitamin complexes, i-immunostimulating therapy.
Umphumela omkhulu wokuvimbela uvela ngokuyindlela yokuphila enempilo nokudla okunempilo. Lokhu kusebenza kubo bonke abadala nasezinganeni.
Umchamo uyinkomba yezempilo. Noma yikuphi ukuphambuka kwezinkomba kusuka kokujwayelekile kuholela emiphumeleni edabukisayo.
I-Urinalysis kufanele yenziwe njalo ngonyaka, ngemuva kweminyaka engamashumi amane - okungenani kabili. Imininingwane ngesimo se-biochemical somzimba wakho izokuvumela ukuthi ulungise imodi yempilo yakho futhi ungaqali lesi sifo.
I-glucose ingenye yemithombo eyinhloko yamandla, ngakho-ke iyadingeka emzimbeni womuntu emsebenzini wayo ojwayelekile, ihlinzeka ngomsebenzi wesintu odingekayo. Ukungena esitokisini, kuyaqhekeka, kudedela izinto ezinamandla. Lo mkhiqizo udla ngokudla okunoshukela. Imvamisa kufakwa uphawu olulinganayo phakathi kwe-glucose noshukela, kepha lokhu akulungile, ngoba ushukela, kanye ne-fructose, kuyingxenye kashukela. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ushukela wegazi ngaphakathi kwebanga elamukelekayo yinto evamile, ngenkathi ushukela emchameni uyinkomba yezinguquko ze-pathological ezithinta umzimba womuntu.
Kunezinhlobo ezintathu zokuhlolwa komchamo:
Ukuhlolwa komchamo oqoqiwe kanye.
Ucwaningo lwe-diuresis oluqoqwe ngosuku.
Ukuhlolwa komchamo oqoqwe ngezikhathi ezithile.
Kokuhlaziywa kokugcina, umchamo uqoqwa amahlandla amane: ukusuka ngo-8 a.m kuya ku-2 p.m., kusuka ngo-2 kk kuya ku-8 p.m., kusuka ngo-8 kk kuya ku-2 a.m., kusuka ngehora lesibili ekuseni kuze kube ngu-8 ekuseni.
Izimbangela zeglucose emchameni:
Kwezinye izimo, izingane zingaba nemiphumela yokuhlola yamanga. Zingavela ngenxa yokuthi ingane yaphuza ama-antibhayabhithi, yathatha uvithamini C omningi noma yadla kakhulu ngokweqile ngosuku olwandulela izivivinyo.
Ngaphambi kokuhumusha imiphumela yokuhlolwa, kuyadingeka ukuthi ungafaki onke amaphutha okungenzeka uphinde uphinde uhlaziye uma kunesidingo.
Ucwaningo olunjalo aludingi ukulungiselelwa okukhethekile nolude. Umchamo uqoqwa yisiguli esisodwa phakathi nosuku emgqonyeni oyinyumba ogulayo (ilitha-litha elilodwa kufanelekile). Ingxenye yokuqala ekuseni ye-ketshezi iyakhanywa, ngaphandle kokubamba iqhaza ekuhlaziyeni, kanti ezilandelayo ziqoqwe ngokuphelele. Ukuhlolwa komchamo ushukela kuyindlela ebanzi kakhulu yokuthola inani le-glucose elikhona emchini.
Ukuqoqwa komchamo ushukela
Ukuze ucwaningo luphelele futhi luthembeke kakhulu, kufanele ulalele izincomo futhi uqoqe kahle umchamo ushukela.
Kufanele kuhlukaniswe ngokushesha ukuthi kunezinhlobo ezimbili zezifundo lapho kukhona i-enzyme okukhulunywa ngayo ku-urological fluid - lokhu kuhlaziya ekuseni nansuku zonke. Kulokhu, inketho yesibili ibhekwa njengeyofundisayo futhi eyiyo kakhulu. Uma kungekho izinsolo zokuphambuka kulezi zinkomba noma njengokuhlaziywa okuyinhloko, kungabekwa ukuhlaziywa kwasekuseni. Uma eveze inani elandayo lesikhombisi sentshisekelo, khona-ke ukucacisa umphumela, udokotela angabeka ukuhlaziya umchamo nsuku zonke.
Imithetho enconywayo yokuqoqa uketshezi ilula, ayidingi ukulungiswa okwengeziwe, kepha indlela efanele yokufunda izokuvumela ukuthi uthole imiphumela yenhloso.
Ukunqunywa koshukela emchameni
Ukuhlaziywa kwe-Morning kwenziwa ngesampula mayelana ne-150 ml ye-ketshezi, ebekwe esitsheni sengilazi, okumele ilungiswe ngaphambili: igezwe futhi yomiswa. Ngemuva kwalokho isiguli sidlulisela amasampula elabhorethri eyedwa noma udokotela ochwepheshe. Isitsha kufanele sivalwe kahle ngesivalo.
Ukuze wenze umphumela ube ngokoqobo ngokwengeziwe, kufanelekile ukulandela izincomo eziningi zezokwelapha: ngaphambi komcimbi "wokuzigeza," kufanele ugeze ngokuphelele ngokugeza ngokuphelele i-perineum. Kulokhu, faka amanzi afudumele ngensipho ye-alkalinity. Lokhu kungenxa yokuthi umchamo ungaqukatha ama-microorganisms angahlakaza ngokushesha ushukela. Ngakho-ke, umchamo kufanele ungabi nokungcola okwengeziwe futhi unikezwe ngokushesha elabhoratri. Isikhathi esivela esikhathini sokuqoqwa kokuhlolwa kwelebhu kufanele singabi ngaphezu kwamahora ayisithupha.
Kuze kube manje, ukunqunywa kweshukela kumchamo kwenziwa ngokusetshenziswa kwemichilo yokuhlola. Le ndlela ikuvumela ukuthi wenze lolu cwaningo, ngaphakathi ezindongeni zezindawo zokusebenzela, nasekhaya. Ukunemba kwale ndlela kuphezulu impela - 99%.
Ukuhlaziya uqobo lwenziwa ngezigaba:
Ukuqoqwa kwezinto zokuhlola.
Kuthathwa umucu - kuhlolwe (kwenziwa ngeplastiki), lapho imidwebo emincane yemibala ehlukahlukene isetshenziswa khona, ngamunye wabo uphathwa nge-reagent ethile.
Umucu wokuhlola wehliselwa kuloluhlu lokuhlola, ususwe bese kuthi okukhishwe ngokweqile kusetshenziswa iphepha lokuhlunga.
Iminyaka cishe yomzuzu kanti isithunzi esitholwe emapheshana siqhathaniswa netafula elikhona.
Kufanele kuxwayiswe ukuthi akufanele uphuthume futhi wenze ukuhlolwa esikhathini esingaphansi komzuzu, ngokufanayo akufanele uchithe ngaphezulu isampula yokuhlola isikhathi esingaphezu kwemizuzu emibili. Ukuphambuka okunjalo okuvela ezincomeni kugqame ngokuqothuka kwezinkomba.
Kwesinye isikhathi udokotela uchaza ukuhlaziya umchamo wansuku zonke. Lokhu kuhlaziywa kubizwa nsuku zonke, ngoba ukuqoqwa komchamo wokucwaninga kwenziwa ngaphakathi kosuku olulodwa.
Uketshezi lokutadisha luqoqiwe, njengasekuqaleni, esitsheni seglasi esomile nesimsulwa ngesivalo. Umthamo womkhumbi wokuqoqa awu-3 kuya ku-5 amalitha. Ukuzikhethela uqobo kuncike ezicini ezithile zomzimba wesiguli, futhi ikakhulukazi, inani lokuphuma komchamo nsuku zonke.
Umchamo wokuhlaziywa uqala ukuqoqwa isikhashana ukusuka ku-6 kuye ku-9 ekuseni ngosuku olulodwa kuze kube yisithupha kuya kweyisishiyagalolunye ekuseni ngosuku olulandelayo.
Ngemuva kobusuku, ingxenye yokuqala yomchamo ayihambi iyohlaziywa, yehliselwa endlini yangasese. Ukuchama okulandelayo kubhekwa njengokuqala, kanti okokugcina kumane kuyingxenye ethathwe ngokushesha ngemuva kokulala ekuseni ngakusasa.
Ngenkathi ukuhlaziya kuqoqwa, izinto eziqoqiwe kufanele zigcinwe endaweni epholile ngamazinga we-4 - 8 ° C (ngokwesibonelo, esiqandisini). Imbiza kufanele ivalwe ngokuqinile ngesivalo.
Inani lomchamo owabelwe ngosuku nalo lilungiswa ngudokotela ohambelayo - udokotela oyi-urologist. Izinkomba ezifanayo ziboniswa ephepheni - ukuqondisa.
Ngemuva kokuthi ukuqoqwa sekuqediwe, okuqukethwe embizeni kuyaqhaqhazela kahle, emva kwalokho kukhethwe ingxenye yayo ukuze icwaningwe.
Ukuhlaziya, uketshezi lokuhlola olungu-150 ml luyiswa esitsheni esingama-200 ml.
Kungakapheli amahora ayisithupha alandelayo, isitsha kufanele siye elabhorethri, ngaphandle kwalokho umphumela wokufunda ngeke ube yiqiniso kangako.
Umchamo wansuku zonke ushukela unikezwa esimweni lapho kukhona izinsolo zesifo sikashukela. Uphendula umbuzo wokuthi ingakanani i-glucose eqoqwe umchamo ngosuku.
Lokhu kuhlaziya kuvumela udokotela onguchwepheshe ukuthi athole isithombe esingokoqobo sezinguquko ze-pathological kunokuhlola ushukela wasekuseni. Isithombe esiphelele xaxa singatholakala kuphela ngokwenza ucwaningo olwengeziwe.
Umuthi wanamuhla unganikeza izindlela ezintsha zokunquma ushukela emchameni: ukusetshenziswa kwemichilo ekhethekile nezixazululo, okubhekiselwa kuzo njengezindlela zokucacisa eziphakeme kakhulu.
Ukuthi kukhethwa kanjani uketshezi lokuhlaziya kwenziwa, futhi yiziphi izindlela zomuthi wanamuhla ezinganikeza iziguli zazo, sekushiwo ngenhla. Manje kufanele uqonde ukuthi yini imvelo kashukela emchameni, evunyelwe futhi ikhulume ngempilo yabantu, futhi yisiphi izinkomba ezikhomba ubukhulu bomzimba obukhulu.
Emzimbeni ophilile, inani le-glucose yansuku zonke kumchamo livunyelwe yisibalo esingaphakeme kuka-2.8 mmol.
Kunomkhwa obizwa ngokuthi yi-renal, olawulwa njengezinga eliphakathi kashukela egazini, kepha ongumuntu ngamunye ngokwemvelo. Ngokwesilinganiso, kubantu abadala le nombolo inqunywa isibalo se-10 mmol / L, ngenkathi kwabesifazane abasesikhathini sokukhulelwa nezingane ezincane lesi sikhombisi sisezingeni eliphansi futhi sinqunywa umkhawulo ophakathi kuka-7 mmol / L.
Ngakho-ke, inqubo ejwayelekile yoshukela kumchamo ukungabikho kwayo, noma imikhondo eyodwa ekhona kuyo futhi ayidluli umkhawulo ovumelekile we-0.06 - 0.083 mmol / L, kwezinye izimo leli nani lenyuka lifinyelela inani le-0,2 mmol / L.
Kusho ukuthini ukuthi ushukela womchamo?
Ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile komzimba, ushukela osezinso uhlula izihlungi ze-glomerular futhi ukhangiswe ngokuphelele yi-renal tubules, engena ohlelweni lokujikeleza komuntu. Ngakho-ke, alungeni umchamo futhi, ngenxa yalokho, alutholwa kumchamo.
Ukusuka kulokhu, ngokuphetha, kungaphendula umbuzo, kusho ukuthini ushukela kumchamo? Lokhu kukhombisa ukuba khona kohlobo oluthile lokungasebenzi kahle emzimbeni.
Kuqala, kulinganiswa izinga lale ngxenye esegazini, umkhawulo ojwayelekile wawo osebangeni usuka ku-8,8 uye ku-9.9 mmol / L. Uma ngabe le nkomba iqala ukwanda, izihlungi ze-renal ziyeka ukubhekana naleli nani le-adsorption, ngakho-ke ingxenye yeglucose ihlala umchamo. Isithombe esinjalo somtholampilo kwezokwelapha sibizwa ngokuthi yi-glucosuria.
Ushukela ungena emzimbeni kanye nokudla, ikakhulukazi ama-carbohydrate acebile kuwo. Ngemuva kokudlula emgudwini wokugaya ukudla, le ngxenye yokudla ikhangiswa emathunjini futhi ngenxa yalokho ingena egazini, elithwalwa emzimbeni wonke futhi, ngenxa ye-insulin, lingena kuzo zonke izakhiwo zeselula. Ingxenye ngesimo se-glycogen ikhephuka esibindini. Futhi okunye, kwenziwa ngegazi ezinso, lapho kuhlungwa khona, okwenziwa ngemicibisholo ethile ye-glomerular, ewela kumchamo oyinhloko.
Ngemuva kwalokhu, kanye nomchamo, i-enzyme okukhulunywa ngayo ingena kuma-proximal renal tubules. Kulapha lapho, lapho kukhona khona iprotheni ekhethekile, ushukela udonswa emuva egazini. Kuze kube yilowo mzuzu, lapho izinga lawo esegazini lingwedluli okujwayelekile, ligxila ngokuphelele. Okusho ukuthi, umuntu ophilile akufanele abe noshukela kumchamo. Kepha lapho nje umkhawulo usudlulile, ingxenye yeglucose iyayeka ukukhangiswa, isasele kumchamo.
Kancane kancane, njengoba iminyaka ikhula, leli zinga lokujwayelekile liqala ukuncipha, okubandakanya ukwanda kwalo komchamo. Futhi ngokunembile maqondana nokwehla komkhawulo wezinso nokukhuphuka kwezinga lawo egazini ukuthi ukuvela kwenkinga okukhulunywa ngayo kungahambisana.
Ngakho-ke, ushukela kumchamo uyinto eyingozi kakhulu, umuntu angenalungelo lokungayinaki ukuze agweme ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinkulu kanye ne-pathologies.
Ngaphambi kokuqhubeka nokuhlaziywa kwesithombe esisodwa noma esinye somtholampilo walesi sifo, uchwepheshe kumele abe nomqondo ngempela wezizathu ezingenzeka ezingavusa ukusabela okufanayo komzimba wesiguli, okuholele esithombeni esinjalo.
Lapho sesihlolile indlela ebukeka ngayo le enzyme kulokho okuphuma emzimbeni, singaphetha ngokuthi izimbangela zikashukela kumchamo ziyafana nalezo ezibangela ukwanda kwezinga le-glucose egazini.
Isifo sokuqala esinamaphesenti aphezulu okuthola isifo isifo sikashukela.
Isifo i-Itsenko-Cushing yisifo esidala ukubhebhethekisa isizinda sokukhiqiza ngokweqile i-adrenocorticotropic hormone yi-pituitary gland. Isebenza njengomlawuli wemisebenzi ye-adrenal.
I-Pheochromocytoma iyi-tumign esebenzayo enobuthi, umthombo oyinhloko wawo okwangamaseli we-chromaffin wohlelo lwe-sympathoadrenal.
Ukushintshwa kwezifo ezithinta izitho ezifana nesibindi, izinso, i-pancreas. Uma kwenzeka ukungasebenzi kahle emsebenzini wezinso, ukwephulwa kwenzeka ngesikhathi sokubuyiselwa kweglucose kanye ne-adsorption yayo egazini - kulesi simo, ushukela kumchamo ungavela ngisho ngaphandle kokukhuphuka kwezinga laso egazini.
Indlela ebabazekayo yenkambo ye-encephalitis, ukuba khona komlando wesiguli wokuthathwa kokuwa kwesithuthwane, okuthi, ngokusebenza ohlelweni oluyisisekelo lwezinzwa kuvuse ukungasebenzi kahle emzimbeni.
I-Thyrotooticosis yisimo somzimba womuntu esibonakala sivela ngokweqile kwama-hormone egilo. Lesi simo sibizwa nangokuthi yi-hyperthyroidism.
I-Glomerulonephritis iyindlela enzima yokulimala kwezinso okuvikela ukuvuvukala.
Ezinye izifo zohlelo lwe-endocrine.
I-Pyelonephritis yisifo sezinso esivuvukelayo.
Isifo sikaGirke siyindlela eyindlalifa yofuzo ebonakala ngesici ohlelweni lwe-enzyme lwesibindi olushintsha i-glucose-6-phosphate ibe ushukela.
Inkambo ekhulayo yesilonda esithathelwanayo somzimba.
Ukwakheka kwe-tumor okuthinta ubuchopho.
Isibindi se-cerebral hemorrhage.
I-Meningitis noma i-encephalitis.
Ukudonsela igxuma ipharamitha embuzweni kung:
Ukusebenza komzimba okusebenzayo.
Ukucindezelwa, ukucasulwa kohlelo lwezinzwa oluyinhloko.
Ukuqina kwemizwelo kwesiguli.
Imikhiqizo yokudla. Isibonelo, uma udla imbiza yezinyosi bese uyahlaziya, khona-ke izinga likashukela ku-serum nomchamo wegazi womabili lizomuka esikalini. Yize izinkomba ezinjalo azihlali isikhathi eside.
Uthola ukwelashwa usebenzisa izidakamizwa ezithile, ngokwesibonelo, izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala.
Ukudakwa kakhulu okwenzeka ngemuva kokufaka ubuthi nge-chloroform, morphine, phosphorus kanye / noma i-carbon monoxide.
Ngokusekelwe kuhlu olubanzi lwezizathu ezingavusa le ndlela yokusebenza kwengqondo, singaphetha ngokuthi ukubonakala koshukela emchameni kuyinkomba yezinguquko ezenzeka emzimbeni ezithinta umzimba womuntu kanye nesizathu esenza ukuthi isiguli sifune usizo lodokotela.
Amanani we-glucose angaguquguquka, kwabesilisa nakwabesifazane. Kuya ngeminyaka nangendlela yokuphila, ukudla kanye nezinye izinto. Uma ushukela ukhuphukile kanye, ungesabi, kungcono ukuphinda uvivinye.
Ukwehla kwesisindo okungalindelekile
Ukuluma kwezitho zangasese nokucasulwa.
Uma okungenani kunenye yalezi zimpawu, kufanele uthintane nodokotela ukuze ahlolwe futhi enze isifo.
Ushukela ne-acetone kumchamo
Imbangela evamile yoshukela emchameni yisifo sikashukela. Imvamisa ezigulini, i-acetone itholakala nomchamo.
I-Glucosuria ku-mellitus yesifo sikashukela itholakala lapho izinga likashukela egazini lehliswa kakhulu. Lesi sithombe somtholampilo siyabonakala ezigulini ezincike kwe-insulin.
Lapho ushukela kumchamo ungaphezu kwe-3%, okuqukethwe ama-acetone (ketones) emzimbeni kuphakama.
I-acetone noshukela ziyizimpawu ezicacile zesifo sikashukela. Ezimweni ezinjalo, iziguli zidinga imijovo ye-insulin.
Futhi, i-acetone ingaba ngaphakathi komchamo kanye nezinga eliphansi le-ushukela.
Inkomba ye-acetone emzimbeni kumele ilawulwe. Lokhu ungakwenza hhayi emtholampilo kuphela, kepha nasekhaya, uthenga izivivinyo ekhemisi: I-Ketostiks, Acetontest, Ketur-Test.
Ukususa ushukela egazini nasemchameni, udinga ukubhekana nembangela yesifo sikashukela. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulandele ekudleni kwabanesifo sikashukela.
Okokuqala udinga ukuletha izinga le-glucose egazini libe yinto evamile. bese kuba nomchamo. Ngesikhathi sokulashwa, kufanele ubheke ukuthi ukululama ngeke kuze ngokushesha okukhulu.
I-decoction yamakhambi. Hlanganisa izimpande ze-dandelion ezichotshoziwe, amaqabunga e-blueberry kanye ne-nettle. Thela amanzi abilayo ngesilinganiso sengilazi eyodwa ngezipuni zezithako. Thatha umhluzi kanye njalo ezinsukwini eziyi-8 ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Imbewu yama-oats. Udinga ukuthululela inkomishi eyodwa yama-oats nezinkomishi ezi-5 zamanzi abilayo. Bilisa le ngxube isikhathi esingangehora bese unitha. Ungadla ingilazi ngaphambi kokudla ngakunye.
Ama-Blueberries Umhluzi ulungiselelwe kusuka kumaqabunga aqhekeziwe, abilisiwe nge-2 tbsp. amanzi abilayo. Pheka imizuzu emihlanu. Ithuluzi lizosiza ukwehlisa ushukela emchameni uma uphuza uhhafu wengilazi imizuzu engama-25 ngaphambi kokudla.
Usuku nosuku, ungadla uhhafu wethisipuni kasinamoni, uyengezelela itiye noma ukudla. Kuzoba wusizo ukuxubanisa i-kefir nesinamoni ngesifo sikashukela. Ukusetshenziswa kwalesi zinongo kunciphisa kahle ushukela kumchamo nasegazini.
IGlucosuria ukutholakala kweglucose emchameni. Ibonisa isimo se-carbohydrate metabolism emzimbeni. Emalabhoratri anamuhla atholakala emphakathini, izindlela ezisetshenziselwa ukuthola i-glucosuria azikwazi ukubamba amazinga we-glucose aphansi kakhulu. Ngakho-ke, ukutholwa kwayo kumchamo kubhekwa njengesimo se-pathological. I-carbohydrate metabolism futhi ikakhulukazi inqubo yokuphuma kwe-glucose yizinso izinqubo eziyinkimbinkimbi. Kuqala, izinso zihlunga ushukela omncane egazini, khona-ke inani elithile lama-carbohydrate libuyiselwa emuva egazini.
Ukutholwa kwe-glucose kumchamo kwenzeka kulezi zimo ezilandelayo.
Ukudlula ezingeni elithile (umkhawulo wezinsini) kashukela egazini.
Izinguquko ekuhambeni kwegazi ezakhiweni zezinso noma izinqubo zokuphuma kwe-carbohydrate yizinso.
Ukwanda kweglucose yegazi ngaphezulu komkhawulo wezinso kuyimbangela evame kakhulu ye-glucosuria. Noma kunjalo, inkomba yomkhawulo wezinso ngokwayo iyahlukahluka ngokuya ngeminyaka nomsebenzi wezinso.
Izindlela zelebhu noma ezinobukhulu zingasetshenziswa ukuthola i-glucosuria. Kwenziwa ucwaningo lokuhlolwa komchamo olujwayelekile noma lwansuku zonke.
Izindlela zokulinganisa - ukuthola iqiniso lokuba khona kwe-glucose kumchamo. Lokhu, kusetshenziswa izindlela ezingabizi kakhulu ezisebenzisa ama-reagents emapheshana ephepha (isibonelo: i-glucofan, i-glucotest). Naphezu kokulula okuhlobene, kungenzeka ukuthi uhlole ukwephulwa kwe-carbohydrate metabolism, okudingekile ekwelapheni lesi sifo. Ngakho-ke, i-glucosuria kuleli cala izoba ne-glucose izinga lomchamo we-2 mmol / L (ku-urinalysis ejwayelekile, izinga le-glucose efinyelela ku-1.7 mmol / L libhekwa njengejwayelekile).
Ukwephulwa okuphelele ngokuphelele kwe-carbohydrate metabolism kuhlolwa nezinga le-glucose kumchamo wansuku zonke. Okudinga amasu anembile (amaningi).
Izindlela ezincishisiwe (Indlela yama-Gaines, indlela ye-polarimetric, indlela ye-enzymatic glucose oxidase) zisebenzisa amandla weglucose ukwakha amakhompiyutha nama-reagents akhethekile, aguqula izakhiwo zekhambi lelebhu. Ngokusekelwe ushintsho olutholakele, inani lama-glucose lokuphakama ngalinye umthamo womchamo linqunywa.
Ochwepheshe bahlukanisa phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene ze-glucosuria:
Kubangelwa ukuvuvukala okukhulu kwamanyikwe.
I-glucosuria yesikhashana emaqenjini athile (abesifazane abakhulelwe, izinsana) ngemuva kokudla isamba esikhulu sokudla okune-carbohydrate ngaphandle kokuxilongwa yisifo sikashukela.
Ngokumelene nesizinda sokulimala kobuchopho: ukulimala kobuchopho obuhlukumezayo, isimila, izifo zokuvuvukala kobuchopho kanye nezitho zaso, izimo ezethusayo, i-hypoxia ende
Ngezinguquko ezishiwoyo ezingokomzwelo: izimo ezinempilo, ezicindezelayo.
Kwezifo ze-endocrine: ingxube engahambi kahle ye-adrenaline, i-thyroxine, i-glucocorticoids. Isibonelo, nge-acromegaly, i-Itsenko-Cushing's syndrome, pheochromocytoma, nabanye.
Uma kwenzeka ubuthi noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezithile: ubuthi nge-chloroform, phosphorus, ukusetshenziswa isikhathi eside kwezidakamizwa ze-cortisol nabanye abanye.
I-Renal glucosuria - ngenxa yomonakalo wezinso ngokwazo. Uma kwenzeka kufakwa i-glucose engasebenzi kahle ezinso. Kwenzeka ekuphazamisekeni kokuzala, kanye nephritis engapheli, i-nephrosis, ukwehluleka kwe-renal acute nezinye izifo.
Ngokuvamile, izimbangela ze-glucosuria zingahlukaniswa zibe: ezihlobene futhi azihlobene nama-pancreas. Izimbangela ezikhona manje.
Ukuwohloka kokusebenza kwezinso noma kwesibindi.
Ukwanda kokudla kwama-carbohydrate ngokudla.
Isifo sikashukela se-glycosuria
Imvamisa yokusatshalaliswa ingeyokuqala phakathi kwe-glucosuria. Amazinga kashukela we-urine anganqunywa ngesimo sokulandela, noma amanani amakhulu kakhulu.
Ngokuvamile, ezigulini ezinesifo sikashukela, ukutholakala kwe-glucose kumchamo kuhambisana nokwanda okukhulu kwe-glucose yegazi (glycemia). Kungabhekwa: ukukhathala okhuphuka ngobuthakathaka, umlomo owomile, ukoma, ukunciphisa ukubekezelela kokuzivocavoca, ukuncipha kwesisindo, ukwenza kusebenze kanye nenkambo ende yezifo ezithathelanayo (ikakhulukazi izifo ezithinta umchamo). Ezimweni ezimbi kakhulu, ukwazi ukungalungiseki kungenzeka.
Ukwanda kokukhishwa komchamo (i-polyuria), kanye nokwehla kwamandla adonsela phansi (hypostenuria).
Ukuvela komchamo wemizimba ye-keto ne-acetone. Ihambisana nokushintshwa kwephunga lomchamo.
Kuvela ubunzima obuhlukile ekuxilongeni i-glucosuria kwabesifazane abakhulelwe.
Imvamisa, umkhawulo wokukhishwa kwe-glucose yizinso ezinshukela ushukela uyancipha, ngakho-ke ngesikhathi sokukhulelwa, cishe i-10% yabesifazane abakhulelwe bane-glucosuria. Kuyadingeka ukwenza izivivinyo ezikhethekile (ukuhlolwa kokubekezelela i-glucose) ukutadisha ushukela wegazi ukuhlukanisa izinguquko zomzimba nesifo sikashukela sokukhulelwa.
Ukwelashwa kuhloselwe ukuqeda i-glucosuria, kepha ukuqeda imbangela yokubonakala kwayo. Endabeni ye-glucosuria yesifo sikashukela, kuyindlela yokwelapha isifo sikashukela. Gxila ekubuyiseni kwamazinga kashukela egazini ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile.
Ngesikhathi sokwelashwa ungakhawulisi isiguli esilinganisweni samanzi asetshenzisiwe. Kulesi simo, ukoma kuyindlela yokuvikela enciphisa ukulahleka kwamanzi kanye ne-glucose ngomchamo. Ukuvinjelwa ekuphuzeni (ngokwesibonelo, ukuqeda i-polyuria) kuzosheshisa ukomisa.
Njengoba, kaningi, i-glucosuria kwisifo sikashukela ihambisana nokwanda kwenkambo yesifo, kwenziwa kakhulu ukwelashwa okwengeziwe. Kungenzeka ukuthi udlulise (okungenani isikhathi esifushane) ukuze u-insulin, ukhuphule noma ubuyekeze umthamo wemithi esetshenzisiwe, ukusetshenziswa kwekhambi lokuhlanganiswa.
Lapho ukukhulelwa nokutholwa kwesizathu somzimba we-glucosuria, kunconywa ukudla ukudla okuncane ukuze wehlise umthwalo osheshayo kumanyikwe.
Ngokwehlukana, akuyona inkambiso ukukhipha izinkinga ezihambisana ne-glucosuria yesifo sikashukela. Izinkinga ezibangelwa isifo sikashukela i-mellitus (ekuqaleni noma sekwephuzile) ziyabhekwa.
Ukuba khona kwe-glucosuria kungabonisa:
Izidingo ze-insulin ezandisiwe.
Ingozi eyandayo yokuthola i-ketoacidosis ne-coma.
Ngesikhathi sokukhulelwa, amathuba amakhulu okuthuthukisa i-gestosis, ukukhipha isisu ngokuzenzakalelayo, ukufa kwe-fetus, i-polyhydramnios, ukulimala ngesikhathi sokubeletha.
Ukutholwa kwe-glucosuria ku-mellitus yesifo sikashukela kudinga ukubonisana nodokotela ojwayelekile noma i-endocrinologist nokulungiswa okusheshayo kokwelashwa kwesifo sikashukela.
Ushukela ophakeme womchamo
Kaningi, kususelwa kuzinkomba zamazinga kashukela egazini, isimo sezinhlelo ezahlukahlukene nezitho zomzimba womuntu kunqunywa. Imvamisa, le nkomba akufanele idlule ku-8.8-9,9 mmol ilitha elilodwa.
Uma izinga likashukela wegazi likhuphuka, ama-tubules ezinso alahlekelwa yikhono lokuthola ngokujwayelekile inani elithile likashukela egazini eliphuma umchamo. Kungenxa yalokhu ukuthi ushukela uqhamuka umchamo - le nqubo ibizwa ngokuthi yi-glucosuria. Ushukela wegazi ukhuphuka nobudala, futhi futhi ngenxa yezifo zezinso ezahlukahlukene.
Ukuxakaniseka koshukela okujwayelekile
Lapho isimo somzimba sejwayelekile futhi kunezinkinga zempilo, okuqukethwe ushukela kumchamo kufanele kube okuphansi kakhulu. Amanani we-glucose kuleli cala aqala ku-0.06-0.083 mmol ngelitha. Ngokuhlaziywa kwe-urochemical noma okujwayelekile komchamo, ochwepheshe abakuboni okuqukethwe okunoshukela okunjalo - kukholelwa ukuthi izinkomba zijwayelekile.
Izifo ezithinta Ukwanda Kwe-Urine Ushukela
isifo sesibindi ngezindlela ezahlukahlukene zobulukhuni,
Ubuthi obukhulu (i-carbon monoxide, i-morphine, i-chloroform noma i-phosphorus),
ukucasuka kohlelo oluphambili lwezinzwa (i-hemorrhage yangaphakathi, ukulimala kobuchopho kobuhlungu, i-encephalitis eyingozi, ukuthathwa kwesithuthwane),
i-pathology ye-renal tubules kanye ne-glomeruli (ngokwesibonelo, glomerulonephritis),
izifo ezithathelwanayo ezingapheli.
Ngaphandle kokuthi kunezizathu eziningi zokuvela kwe-glucose kumchamo, kuvame ukwamukelwa kwezokwelapha ukuthi i-glucosuria ekuqaleni iyisibonakaliso sesifo sikashukela i-mellitus. Ukuxilongwa kusungulwa ngaleli fomu futhi yilapho kuphela lapho kuphikiswa khona yizifundo ezifanele, noma kubongiwe futhi.
Imiphumela yokwanda ushukela kumchamo
I-glucose yomchamo iyinkomba ebaluleke kakhulu engakhombisa ukuthuthukiswa kwanoma yisiphi isifo esibucayi esanele. Kungakho udinga ukubonana nodokotela ngokushesha ngemuva kokuthola iqiniso lokuthi ushukela emchameni uphakanyisiwe.
Kuyaqapheleka ukuthi umzimba womuntu awunasengozini yokwanda okukodwa kwezinga le-glucose kumchamo. Kepha uma i-glucosuria iqinisekisiwe ekuhlaziyeni okwalandela, kuyaphuthuma ukuqala ukwelashwa. Lesi simo siyingozi ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba singalimaza impilo yengane.
Abantu abaseqenjini elithile lobungozi kufanele bahlole amazinga abo kashukela omchamo njalo. Leli qembu lifaka labo abaneminyaka engaphezu kwengama-30 ubudala, abanezihlobo ezinesifo sikashukela, futhi phambilini babekhuphule amazinga kashukela emchameni wabo.
Ingozi enkulu yokwanda kwe-glucose kumchamo ukuthi lesi simo singasiholela ekukhuleni kwesifo esibi kangako njengesifo sikashukela. Kungakho udinga ukuqapha impilo yakho, uvivinya njalo, futhi uma kunesidingo, bonana nodokotela.
Izimpawu zoshukela emchameni
Lapho inani le-glucose equkethe umchamo landa, umuntu uba nezimpawu zoshukela emchameni, okuhambisana ngokuphelele nezimpawu ezinamazinga aphezulu ale nkomba ku-plasma yegazi.
Umlomo owomile uyavela futhi isiguli siqala ukuzizwa somile.
Ukomeka kwesikhumba endaweni yangasese, okucasula ukubonakala kokuqhekeka, ukulunywa kanzima, ukuqhuma, nakho kuyabonakala.
Kukhona ukwanda kwengcindezi yegazi.
Ukwanda komsebenzi wokujuluka kwezindlala.
Isiguli "sivusa" isifiso sokudla, noma yena, kunalokho, wenqaba ukudla.
Umuntu uqala ukuthola amasignali amaningi wokuchama.
Ushukela wase-Urinary emadodeni
Sonke siyaye sihlangatshezwe ngezikhathi ezithile, kanti lapho amaglucose eshintsha, udokotela uphakamisa umbuzo wesidingo sokuhlolwa komzimba okuningana, ngoba ushukela umchamo wamadoda akuyona into engathandeki, kepha uphakamisa ukuthi umzimba wesilisa uthola izinguquko ezinkulu ezingezinhle, umthombo okufanele unqunywe udokotela. Okuhlukile kungukuhlinzwa okwesikhathi esisodwa kwenkomba okukhulunywa ngayo, okungahle kuhambisane, ngokwesibonelo, nokudla okuthile noma umuthi othile.
Ngaphezu kwalokho, ngokungezwa kweminyaka, amathuba we-pancreatitis, nezinye izifo ezithinta ukwakheka kwesakhiwo, kanye nokusebenza okujwayelekile kwezinso ebulilini obunamandla kukhula ngokushesha.
Impela, ushukela akufanele ube khona kumchamo wabantu abadala. Kodwa ochwepheshe nokho bayavuma ukuthi ubukhona bakhe, ngoba le nkomba akuyona into eqhubekayo. Ungahluka ngandlela thile phakathi nosuku. Ukungezwani okunjalo kunqunywa ngeminyaka, indlela yokuphila, imikhuba yokudla nomlando wendoda.
Lokhu kungaphinde kube yinkomba yokuqubuka kwesifo sikashukela okuqhubekayo, kanye nokulimazeka kwendlala yesibindi, i-prostate, nakho kungakhipha okuqukethwe okuphezulu, isifo "esithola" izinsizwa, kodwa sibe sibi kakhulu lapho sikhula.
Ngakho-ke, odokotela batusa ukuthi kudlule ukuhlolwa okujwayelekile ngokuthatha izivivinyo okungenani kanye ngonyaka, kodwa kungcono ukukwenza kanye ezinyangeni eziyisithupha. Indlela enjalo yenkinga ivumela ukubona nokubona lesi sifo emabangeni okuqala entuthuko yaso.
Ushukela kumchamo ngesikhathi sokukhulelwa
Uma umzimba wowesifazane uphilile, le nkomba akumele inqunywe. Kepha uma, lapho kudluliswa ukuhlaziywa, ushukela emchameni ngesikhathi sokukhulelwa unqunywa kanye noma kutholwe okungaphezu kwesisodwa, kepha lokhu kuhlinzwa kwahlukaniswa ngesikhathi, ngakho-ke akufanele ukhathazeke ikakhulukazi - lokhu kuyinkomba yesimo esijwayelekile. Ngemuva kwakho konke, ngesikhathi sokuthatha ukuhlaziya, owesimame olindele ingane angaba ngasizathu simbe esimweni esicindezelayo noma edilini entweni evusa ukugxuma kumazinga kashukela.
Uma inani elikhulayo likashukela kumchamo wowesifazane okhulelwe lihlala isikhathi eside, khona-ke udokotela angaphakamisa ukuba khona kwesifo sikashukela noma enye i-pathology kowesifazane okhulelwe. Ukuqinisekisa noma ukuphikisa lokhu, kunikezwe ezinye izivivinyo.
Ukuze ungaphuthelwa yisikhathi esingemnandi, owesifazane olungiselela ukuba ngumama kufanele ahlolwe umchamo ojwayelekile ngaso sonke isikhathi ngokubonisana nodokotela osebenza ngokubelethisa odokotela abakhulelwe.
Ushukela kumchamo wengane
Uma kuphakama umbuzo mayelana nezindlela zomzimba lapho ushukela umchamo wengane kungenzeka ube khona ngaphandle kokubangela ukukhathazeka okukhulu ezinganeni, khona-ke singaphendula ngokungenakuphikwa ukuthi lesi sici sihambisana ngokuphelele nezimo zobukhona obuvumayo be-glucose kumchamo wabantu abadala.
Izinga layo eliphakeme lingacasulwa ushintsho lwe-pathological emsebenzini womzimba (esinye sezifo eziningi ezingadala lesi sithombe sasemtholampilo), futhi luthande “amaswidi” noma umphumela wokuthatha umuthi othile.
Uma ukuhlolwa kuveza umphumela omuhle, khona-ke udokotela wezingane angakwazi ukuqamba inganekwane yakhe futhi anikeze uhlaziyo olwengeziwe, kepha manje, okuqukethwe kwe-glucose ku-plasma yegazi. Uma okujwayelekile kukhonjiswe lapho, khona-ke udokotela angaphakamisa ukuthi esikhathini esedlule isibalo esithile samaswidi sidliwe yisiguli esincane. Lo mphumela ubizwa ngokuthi ngamanga angamanga.
Kepha kukhona futhi okuphambene nenketho, esimweni sokuthatha inani elanele le-ascorbic acid (amavithamini C), ukuhlaziywa kunganikeza umphumela ongemuhle ongamanga.
Kulula kakhulu futhi kushibhile ukwenza ucwaningo lokuba khona kweglucose emafutheni akhutshiwe kunokuthola le pharamitha egazini. Ngakho-ke, udokotela unquma, okokuqala, ukulethwa kwalolu hlobo lokuhlaziywa kwesiguli, futhi uma imiphumela yocwaningo ikhombisa ukuphambuka kusuka kokujwayelekile, khona-ke ukuhlolwa okwengeziwe, kufaka phakathi nelabhorethri, sekuvele kuhlelwe.
Kepha uma isiguli sesithole isifo sikashukela, ke ukulawula ushukela emchameni onesifo sikashukela cishe akusizi ngalutho. Umuthi wanamuhla unikeza bonke abantu abahlaselwe yilesi sifo ukulawula ipharamitha edingekayo, i-glucometer iyithuluzi elikhethekile lezokwelapha elikuvumela ukuba uhlole ngokuzimela amazinga kashukela egazi ekhaya. Ezigulini ezinjalo, kubaluleke kakhulu ukuqapha le pharamitha kaningana usuku lonke.
Ushukela kanye namaprotheni kumchamo
Lapho unikeza ukuhlolwa komtholampilo noma okujwayelekile koketshezi olucashile, kufaka phakathi ushukela, isisebenzi eselabhorethri sikhomba izinkomba zezimpawu eziningi: lo umbala, i-acidity kanye nobukhulu boketshezi, ubukhona bokungcoliseka kukho, izinga loshukela namaprotheni omchamo, imizimba ye-ketone, i-bilirubin, amangqamuzana abomvu namhlophe egazi, i-urobilinogen, hemoglobin namasilinda.
Ngayinye yalezi zinto eminyakeni edlule, izindinganiso zazo zitholakele. Kunezinkomba ezinjengamaprotheni, okujwayelekile kwengxenye yayo yezinombolo akukho ngaphezu kwe-0,033 ‰ (ppm). Ngakho-ke, ushintsho engxenyeni engamanani yeprotheni kumchamo wesiguli ohlangothini lokukhula kwalo libonisa ukuthi i-proteinuria ikhula emzimbeni womuntu ofundelwayo.
Ngasikhathi sinye, uchwepheshe wenza isaphulelo sokuthi ukwanda okuningana kwale nkomba (kuze kufike ku-0,3 g / l) kungadala i-banal hypothermia noma umane nje uvivinya umzimba ngokutholwa ngaphambi kokuhlaziywa.
Futhi, ukukhula kwamaprotheni ngesikhathi sokuhlaziywa kungabhekwa ngokumelene nesizinda se-toxicosis sekwephuzile kowesifazane okhulelwe. Futhi, izifo ze-pathological ezifana:
IGlomerulonephritis yisifo se-immuno-inflammatory esibonakaliswa ngumonakalo we-glomeruli (glomeruli yezinso).
I-Preeclampia yi-toxicosis sekwephuzile esishiwo ngenhla.
I-cystitis ukuqubuka kolwelwesi lwe-mucous lwesinye.
I-Pyelonephritis iyinhlangano yezifo ezithathelwanayo ezithinta izicubu zezinso.
I-urethritis inqubo yokuvuvukala ethinta izicubu ze-urethra (urethra).
I-Amyloidosis iyindlela yokusebenza yemvelo ehlelekile, okuyisimo se-amyloid (eyinkimbinkimbi yamaprotheni-polysaccharide) ezingqimbeni zezicubu.
Ezinye izifo ezithathelwanayo.
Kunoma yikuphi, uma le pharamitha iphambuka kokujwayelekile, kufanele kwenziwe isifundo sesibili, futhi ukuhlolwa okujwayelekile komzimba ngeke kube ngaphandle kwendawo.
Amanani aphezulu eglucose akhombisa ubukhona be-glucosuria esigulini. Futhi njengoba sekushiwo, isithombe esinjalo singakhula kwezinye izifo, noma sicasulwe yizici ezithile zomzimba.
Ngakho-ke, ukuba khona kwamaprotheni noshukela kumchamo ovela kanye kungaba ukuphambuka kokujwayelekile, kepha ukuhlolwa okwengeziwe ngeke kukulimaze, ngoba izilonda zomzimba zingabacaphukisa.
Kodwa uma inani elandayo lesikhombisi elibhekiwe lingumphumela wanoma yisiphi isifo, imiphumela kashukela emchameni ingaba yinhlekelele. Ngokuphikisana nesizinda samanani aphakeme njalo, isifo sikashukela siqala ukukhula. Kukhona i-lesion ehlelekile yomzimba wonke womuntu ogulayo, ukusebenza okujwayelekile kwamanzi kanye ne-carbohydrate metabolism kuyaphazamiseka, inkinga ngemithambo yegazi iyanda, engakwazi kepha ukuthinta ukusebenza kwamanyikwe.
Ukwehlulwa kuthinta ama-receptors aphathelene nohlelo lwezinzwa, kukhona ushintsho lwe-pathological emikhunjini ye-retina yeso. Kancane kancane, unyawo okuthiwa isifo sikashukela luyakhula, okuholela ekulahlekelweni kwemizwa endaweni yonyawo, ukuphazamiseka kwenzeka esikhunjeni, emalungeni njalonjalo. Esikhathini esizayo, uma izinyathelo ezifanele zokwelashwa zingathathwanga, isiguli esinjalo singathola ubuthi bemikhawulo engezansi, bese ukunqunywa.
Ukwelashwa ushukela womchamo
Ukwelashwa ushukela emchameni kuhlanganisa nokugcina isisindo sesiguli ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile kanye nokukhipha amakhilogremu angeziwe, ngoba ukukhuluphala ngokweqile kungavusa ukubakhona kwezinkinga ezengeziwe.
Uma imbangela ye-pathology okukhulunywa ngayo ingesinye sezifo ezingasivusa, khona-ke udokotela obhalayo uzobhala phansi umthetho olandelwayo wokwelashwa. Kuphela ngokumisa imbangela yezimpande, ungasusa inkinga, futhi ukudla kuzokuvumela ukwenza lokhu ngokushesha okukhulu, ungavumeli ubunzima besifo sikashukela, obungakhula buqamama nesizinda sokuhlaselwa okubukhali kokugxilwa kweglucose kumanani amakhulu.
Ungawehlisa kanjani ushukela womchamo?
Ekuhlolweni okulandelayo, udokotela owazisayo wazisa isiguli ngokubakhona kwe-glucose eyengeziwe kumchamo wayo ofundwayo. Uma umuntu ebhekene nale nkinga okokuqala, khona-ke umbuzo wokuqala oza emqondweni wakhe ukuthi angehlisa kanjani ushukela womchamo?
Futhi into yokuqala ayelulekwa ngayo uchwepheshe ukuthi alungise umsoco wakhe. Isikhathi esithile, kuzodingeka uyeke amaswidi kanye nemikhiqizo ye-confectionery, uthathe indawo kashukela nge-fructose, kusuka kotshwala neminye imikhuba emibi, ukulondolozwa kanye nemikhiqizo yokudla nge "esche" eningi enama-dyes, stabilizer, preservatives, nokunye
Kufanele futhi uguqule uhlelo lwakho lokudla. Kufanele ibe okungenani okungenani namaqoqo ayisihlanu kuya kwayisithupha, kanti izingxenye ezidliwayo kufanele zibe nezincane. Khipha ukudla okulula. Uma umsebenzi wobungcweti wesiguli uhlotshaniswa nokuzikhandla ngokomzimba, kufanelekile ukuphakamisa umbuzo ngaphambi kwabaphathi ngokudluliselwa kwesikhashana emsebenzini olula. Kuzofanela sehlise ubungako bezemidlalo.
Futhi, uma lokhu akwanele, futhi udokotela wakholelwa ukuthi ukwelashwa kudingekile, akufanele kunganakwa.
Izindlela zokupheka ogogo bethu nazo zisebenza kakhulu.
Izindlela zokwelapha ushukela umchamo
Ukuze ungalethi umzimba wakho ezinkingeni ezinkulu kakhulu ezingase ziphakame ngesikhathi sokuhlonzwa okuqhubekayo kwepharamitha okukhulunywa ngalo, ungaphendukela olwazini lwokhokho bethu ukuthola usizo. Usebenzisa amakhambi abantu ushukela umchamo, ungathola imiphumela ebonakalayo ebonakalayo, ulethe i-pathology esiteji sokuxolelwa.
Ngale nkinga, i-decoction evela kumxube we-herbal izibonakalise ngokwayo: kuyadingeka ukuqoqa iqoqo, kuthatha ngokulingana okulinganayo kwamaqabunga e-nettle, amaqabunga e-blueberry kanye nezimpande ze-dandelion eziqunyiwe. Hlanganisa zonke izithako kahle. Thatha isipuni sokubumba okuvela bese uthela ama-200 ml wamanzi abilayo phezu kwawo. Lesi siphuzo kufanele sidakwe, sithathe kathathu usuku lonke ngokushesha ngaphambi kokudla. Umcimbi onjalo kufanele wenziwe kanye njalo ezinsukwini eziyisishiyagalombili.
Ihluza kahle ushukela kumchamo we-momodrika, noma njengoba ibizwa nangokuthiwa yi-melon ebabayo, ithanga noma ikhukhamba. Ngokuvuselela ukukhiqizwa kwe-insulin, kwehlisa izinga likashukela egazini nomchamo. Okokuqala, kuyadingeka ukususa lesi simangaliso semvelo yembewu, futhi uthole ujusi ezingxenyeni ezisele (ungasebenzisa i-juicer). Cindezela inani eliphuma loketshezi lokwelashwa ngenani elincane lamanzi nesiphuzo. Isheduli yokwelashwa ihlinzeka ngokusetshenziswa kwansuku zonke kwalo muthi okungenani amaviki ambalwa. Lo mkhiqizo ungaphinde usetshenziselwe ukulungisa izitsha ezahlukahlukene.
Isiphuzo esiphumelelayo esivela emaqabungeni ama-blueberries. Ukuthola umphumela omkhulu kunayo yonke, kungcono ukuthi ubilise imizuzu emihlanu ezingilazini ezimbili zamanzi abilisiwe. Leli khambi kufanele lithathwe nsuku zonke, isigamu seglasi nengxenye yehora ngaphambi kokudla.
Ukusebenza kahle okukhulu ekuqedeni le nkinga kukhonjiswa yi-decoction of oats. Kuthathwa umthamo owodwa wokusanhlamvu namavolumu amahlanu amanzi abilayo. Le ngxube ifakwa emlilweni omncane, ilethwe ngamathumba futhi, ngale ndlela, ineminyaka engaba ihora. Ngemuva kwalokho iyahlungwa bese idakwa engilazini ngaphambi kokudla ngakunye.
Isiguli esine-glucose ephezulu emchini singazisindisa kule nkinga ngokuthatha isigamu sezipuni zesinamoni ecijile. Ingafakwa kokubili ekudleni naseziphuzweni futhi zithathwe nsuku zonke. Kepha akufanele athathwe.
Lokhu kufaka isiphuzo esiphundu futhi esinempilo: isinamoni nge-kefir.
Kufakazelwe kahle, uma kunesidingo, yehlisa ushukela emchameni, nakubhontshisi. Faka okusanhlamvu okuyisilinganiso esithandathu kuya kwesikhombisa ubusuku bonke emanzini. Okusanhlamvu okuvuvukayo kuzothathwa kungavuthiwe ngosuku olulandelayo.
Ngokubona ukukhululeka kwale nkinga, umkhiqizo wezokwelapha onje nge-fenugreek uzisungule ngokwawo. Lesi sitshalo sinemisebenzi edingekayo ye-hypoglycemic ukukhuthaza ukukhula kokumelana kwe-glucose futhi sinciphise inani loshukela. Inesibalo esikhulu se-fiber, esivimbela i-adsorption yoshukela nokudla okune-carbohydrate ephezulu. Imbewu yalesi sitshalo kumele ifakwe emanzini ngobusuku obanele, iphuze ukumiliswa esiswini esingenalutho nsuku zonke. Isikhathi senkambo yokwelashwa, ukuthola ukwelashwa okusebenzayo, okungenani izinyanga ezimbili. Lokhu kuzolungisa isimo sokuxolelwa.
Kufanele uthathe ukubhuka okungamabhodwe kabhontshisi amabili. Lo bhontshisi kufanele uqoqwe ngendlela eluhlaza, lapho okusanhlamvu kungazange kuqale ukwakheka. Zomise, ugaye ngaphambi kokusebenzisa. Ukulungiselela lo “muthi”, kuyadingeka ukuthi uthathe ama-servings amabili weqabunga lama-blueberries kanye nomthamo ofanayo we-oat straw, okufanele uthele kahle ngangokunokwenzeka, faka ingxenye eyodwa yembewu yefilakisi lapha. Hlanganisa zonke izithako kahle. Izipuni ezintathu zokuqoqa kufanele zifakwe kwilitha lamanzi abilisiwe asanda kubiliswa. Beka isitsha esitofini, ulethe ngamathumba, wehlise ukushisa kuze kube sezingeni elincane bese ucwilisa imizuzu engamashumi amabili. Ngemuva kwalokho, beka eceleni ohlangothini bese uvumela ukupholisa, bese uyayiwa. Inani eliphumayo loketshezi, hhayi ukunamathela kakhulu kumthamo, kufanele lidakwe izinsuku ezimbili.
Ungathola ukusebenza okulindelekile uma ungahlafuna wezipuni ezimbili nsuku zonke zembewu yangaphambi komhlaba. Kungcono ukuphuza lo “muthi” ngenani elanele lobisi.
Abantu abaningi babona i-Jerusalema artichoke njengodoti ohlanganisa izingadi zethu. Abazi nokuthi lo mkhiqizo ulusizo kangakanani. Ukuze uqede le nkinga unomphela, udinga ukuwasha kahle futhi uhlanze isivuno sesilinganiso esisodwa saphakathi. Ngemuva kwalokho kufanele ichotshozwe nganoma iyiphi indlela elula. Thela ukuhoxa okuholele ngelitha elilodwa lamanzi abilayo angasho lutho. Songa umkhumbi ngokuqukethwe kahle bese ucwilisa okungenani ihora. Inani loketshezi olutholakele, hhayi ikakhulukazi ukugcina umthamo, kufanele lidakwe usuku lonke.
Ungaphuza itiye elinempilo kakhulu ngokuphuza amaqabunga amathathu kuya kwamane wesitshalo sokwelapha njenge-honey stevia ku-200 g wamanzi abilayo.
Thenga noma upheke owakho ufulawa we-buckwheat. Thatha cishe isigamu seglasi bese uvusa nge-250 g yeyogathi (okungcono uma kungumkhiqizo wemvelo owenziwe ekhaya). Shiya le phalishi ukuze ligcwale ubusuku bonke. Ngaphandle kokuthola noma yikuphi ukwelashwa okushisa, yidla iphalishi ngebhulakufesi. 14.
Ungancoma isiguli ngesifo esinjalo nsuku zonke esiswini esingenalutho (ngaphambi kokuthatha isidlo sasekuseni) ukuze udle u-anyanisi obhakiwe ngaphambili. Kwanele ukuthatha u-anyanisi ophakathi nendawo.
Ungazenzela itiye elinjalo: ukulungiselela kwalo, sebenzisa cishe amagremu ayi-60 amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka, athululelwa nelitha elilodwa lamanzi abilisiwe asanda kubiliswa. Songa umkhumbi ngalokhu kuhlanganiswa bese uwushiya upholile ngokuphelele. Ukukhazimula okunjalo ngesimo sokushisa kungadliwa usuku lonke ngaphandle kwemikhawulo.
Thatha amaqabunga amancanyana ezinkomo (iningi lawo laziwa ngokuthi i-walnut). Gaya imifino bese uthatha amagremu ayi-10, uthele ama-200 ml wamanzi abilisiwe. Makagcizelele kuze kube yilapho uketshezi lufudumele, bese luyakhwezwa. Thatha ifomu elifudumele ngaphandle kwemikhawulo. Usuku lonke.
Impilo yomuntu i-multifaceted futhi idinga amandla amaningi ukuze ifinyelele ngokuphelele, futhi la mandla anikezwa yi-glucose, engena emzimbeni womuntu ngokudla. Kepha kuthiwani uma kunobuningi balo mkhiqizo? Impendulo iyaziveza - umzimba uthola amandla amaningi okuphila. Kepha lokhu akunjalo. Uma, phakathi kokuhlaziywa, umphumela wayo ukhiphe ushukela emchameni, lapho-ke ukuhlolwa kwesibili nokuhlolwa okwengeziwe kuyadingeka, ngoba umphumela onjalo ungaba nomqondo ongemuhle lapho isiguli sisanda kuthathwa ngokudla okumnandi ngosuku olwandulelayo noma kusiwe egumbini lokuvivinya umzimba. Kepha uma umphumela olandelayo ukhombisa imingcele efanayo, lokho kuyindlela yochwepheshe. Ngemuva kokwenza izivivinyo ezidingekayo nokuhlolwa kwelabhoratri, kumele enze ukuxilonga futhi ahlele ukwelashwa. Kepha, ngaphandle kokulinda lokhu, umuntu oye wahlangabezana nale nkinga angasiza ngokuzimela umzimba wakhe ngokuguqula indlela adla ngayo, futhi, okungcono, yonke indlela yakhe yokuphila.